Hay’aada Amnesty International oo Sheegtay in Ciidamada Burma ay Dagaal isir sifayn ah kuwadaan Muslimiinta Rohingya – Radio Daljir
Seteembar 15, 2017 6:56 b 0
Waxaa soo Baxaysa Cambaraynta loo jeedinayo dowladda Burma ee Xasuuqa xoogan ku haysa musliiminta Rohingya,kuwaas oo dhibaato xoogan kala kulmayeey Todobadyadii ugu dambeyeey militeriga wadankaas.
Hay’adda Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heyo Cadeymo muujineyo In Ciidamada Dowladda Burna ay Howlgal isir sifeyn ah ka wadaan goobaha ay dagan yihiin Muslimiinta Rohingya ee dalkaasi Burma.
Hay’adda ayaa ku boorisay dowladdu Burma inay furto gobolka Rakhine si ay u gaaraan hay’addaha gargaarka iyo kooxaha xuquuqul insaanka qaabilsan.
Amnesty International ayaa sheegtay inay diiwaangalisay sawiro lagu qaaday dayax gacameedka oo muujinaya dab ballaaran oo u muuqda inuu yahay ol-ole cad oo isir sifeyn ah.
Madaxweyne Gaas oo Dib Puntland ugu Soo Laabtay (Sawiro)